के हो एकल संक्रमणीय मतप्रणाली ? - Dakpi Khabar
के हो एकल संक्रमणीय मतप्रणाली ?
December 21, 2017 समाचार
काठमाडौ । एकल संक्रमणीय मतप्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग हुने विधि हो। जसमा केही मुलुकको विधायिकी निर्वाचनमा मात्र यसको प्रयोग हुँदै आएको छ। यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकताक्रमका आधारमा मतदान गर्छन्। मतदाताले एक वा एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउँछन्। तर, एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मतदान गर्दा समान प्राथमिकता नदिई प्राथमिकताक्रम तोकेको हुनुपर्छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
समानुपातिक पद्धतिका सबैखाले फाइदा यस पद्धतिमा पनि पाउन सकिन्छ। जस्तोः समावेशीकरण खेर जाने मतको न्यूनता, साना दलहरूको समेत समानुपातिक सहभागिता आदि। सानो एकाइमा मात्र यस निर्वाचन पद्धतिको अवलम्बन सान्दर्र्भिक हुने भएकाले समानुपातिक भइकन पनि उम्मेदवार मतदाताबीच सम्बन्ध कायमै रहन्छ। यसले मत सट्टापट्टा गर्न पनि छुट दिने भएकाले दलीय गठबन्धनलाई निर्वाचित हुनका लागि निश्चित मत कोटा पार गर्नुपर्छ। यसका लागि मतदाताले उम्मेदवारहरूको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेपश्चात जुन उम्मेदवारले प्राथमिक मतसहित निश्चित कोटा पार गर्छ, र तत्काल निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ।
यसरी घोषणा गर्दा निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्राप्त आवश्यक कोटाभन्दा बढी मत नियमानुसार दोस्रो प्राथमिकता क्रमका उम्मेदवारलाई वितरण गरिन्छ र यसरी मत वितरण गर्दा सबैभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई क्रमशः हटाउँदै लगिन्छ। यो क्रम निर्वाचित गर्नुपर्ने स्थान पूरा नभएसम्म कामय रहन्छ। यसमा मतगणनाका लागि ‘ड्रप कोटा’ अपनाइन्छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ।